Uyilo oluMnyama lwepinki olufudumeleyo lweDuvet Cover 3 Pieces Set Soft Cover of Comforter, China mosaic pink design eshushu iDuvet Cover 3 Pieces Set Soft Comforter Cover Abavelisi, abaxhasi, iFektri - iZhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Uyilo olushushu lwepinki kaMoses oluFudumeleyo olu-3 Iziqwenga zibeke ikhava yokuthuthuzela
Inani Model: F29075
● Hlamba umatshini emanzini abandayo anemibala efanayo, umjikelo omnene. Akukho bhlitshi yeklorin. Ukudilika komile ezantsi okanye ukuxhoma ukoma. Intsimbi xa kufuneka.
● UKUHLAWULWA KOKUQHELEKILEYO. Ipateni yethu ejonge phambili yefashoni yejiyometri lulungelelwaniso lwangoku kunye nolungelelwaniso olufanelekileyo lweebhedi zakho. Sisebenzisa obona buchwephesha buchaza ubuchwephesha bokushicilela kwidijithali kuyo. Xa kuthelekiswa nokuprinta ngokwesiko, ipateni iza ithambe ngakumbi, icacile, kwaye imibala iyaqaqamba kwaye inempilo. Inkqubo yokuprinta kunye nokudaya okuqhubela phambili iqinisekisa ukukhawuleza kombala ophezulu, ukuphela, kunye nokunciphisa ukumelana. Eyona nto ilungileyo kunye negqibeleleyo yokuhlaziya igumbi lokulala.
● Amava amnandi, kulula ukuKhathalela kunye nokuCoca-, kuyathuthuzela, kuyaphefumla, kuyathamba kwaye kuyaseta i-Hypoallergenic Duvet Covet Sets, i-Machine-Washable, i-Anti-Fade, i-Anti-Wrinkle, i-Anti-Shrink kunye ne-Stain Resistant!
● Izibophelelo ze-Zipper kunye ne-Corner-Design elula ye-zipper kunye ne-zipper esemgangathweni. 4 Iimbophelelo zekona ezikoneni zecala leduvet zigcina uMthuthuzeli esemgangathweni
Igama lemveliso Uyilo olushushu lwe-mosaic epinki Isembozo seDuvet 3 Pieces Set Soft Cover of Comforter
Isandi esitsha sokuhombisa ipholiyesta esinegumbi lokuhlala
I-Embroidery 100% yePolyester iBedspread HF29034 Setha i-Quilt Coverlet
Ilinen eBhrintiweyo enesitayile Jonga ukuKhanya kwamnyama amakhethini eTywina iTyhefu yoNyango lwe Window